Qaxootiga Dhadhaab iyo Kakuma oo soo wajahday walwal ah in qasab looga saaro xeryaha qaxootiga – Radio Damal
Qaxootiga Dhadhaab iyo Kakuma oo soo wajahday walwal ah in qasab looga saaro xeryaha qaxootiga
Waxay sheegtay inay u aragto Soomaaliya inay tahay “dal aan xasilloonayn oo ay weli ka dhacayaan weerarro argaggixiso oo soo noqnoqda”, iyadoo raacisay “Kakuma waxay ii noqotay guri aan ku noolaado, halkaas oo aan nabad ku helay”
Kakuma, oo hoy u ah in ka badan 190,000 oo qaxooti ah, waxay ku taal waqooyi-galbeed Kenya. Dhadhaab waxay ku taal bariga Kenya, una dhow xadka Soomaaliya, laakiin Soomaali badan ayaa ka kala guuray labada xero. Nolosha labada degsiina way adkaan kartaa. Xerooyinku waa fog yihiin, qaxootiguna waxay inta badan ka cawdaan in lagu xayiro halkaas iyada oo aan la helin xorriyad dhaqdhaqaaq, oo ay weheliso musuqmaasuq aad u sarreeya iyo adeegyo liita, laakiin ugu yaraan, waxay yiraahdeen, waa ammaan oo qaar badan ayaa heli kara fursado waxbarasho ama ganacsi.
C / raxmaan Axmed, waa 24-jir Soomaali ah oo ku noolaa Kakuma muddo ku dhow 10 sano, wuxuu sheegay inuu la yaabay amarka oo uu ka walwalsan yahay inay tahay diidmo “dadnimo” “Xulku ma ahan inaad qaxooti noqoto, qofna ma doorto inuu qaxooti noqdo,” ayuu yiri
Qaar ka mid ah dadka ka faalooda arrimaha Kenya ayaa ku eedeeyay saraakiisha inay ku dhawaaqeen arintan sababo dhaqaale. “Dowladda Kenya waxay u aragtaa Dhadhaab Bangi ay sida joogtada ah uga sameyso lacagaha lagala baxo, iyadoo adeegsanaysa hanjabaadda ah inay xireyso si ay lacago uga hesho beesha caalamka,” ayuu bartiisa Twitter-ka kusoo qoray falanqeeye caan ah oo falanqeeya arrimaha siyaasadda Kenya ahna sawirqaade sawir gacmeed Patrick Gathara.
C/laahi Maxamed Cali, Taliyihii hore ee Sirdoonka Soomaaliya, ayaa sheegay in kastoo ay jiri karaan walaac amni oo la xiriira xeryaha, hadana inta badan dowladda Kenya waxay umuuqatay mid buun buuninaysa. In kasta oo uu intaas ku daray in kooxda hubaysan ee Soomaaliya ee al-Shabab ay suuragal tahay inay ku soo dhex dhuuntaan xeryaha oo ay qortaan dagaalyahanno, “guud ahaan uma malaynayo inay qaxootigu [khatar] amni [baaxad leh] ka weyn yihiin”.
Cali wuxuu kaloo sheegay in dad badan oo Soomaaliyeed ay rumeysan yihiin in dowladda ay u isticmaaleyso xirnaanshaha labada xero arrimo siyaasadeed oo ku saabsan khilaafaadka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya dowladda Soomaaliya, isla markaana aysan u sahlaneyn iyaga inay si dhaqso ah ku xirtaan xeryaha maadaama ay la kulmi doonaan caalamka Cadaadis badan.
Dowladda Kenya ayaa beenisay in tallaabada ay ku xireyso xeryaha ay la xiriirto arrimo diblumaasiyadeed oo Soomaaliya kala dhexeeya.
Tiro badan oo ka mid ah dadka Dabaab iyo Kakuma ayaa rajeynaya in dib u dejin loogu sameeyo dal reer Galbeed ah. Saxafiyiinta qaxootiga ee Kakuma ayaa sheegaya in tirada dadka is-dila ay sare u kacday kadib markii Donald Trump uu noqday madaxweynaha Mareykanka, markii kumanaan qaxooti ah oo filayay in ay u safraan wadanka dib loo dhigay kiisaskooda